Tari-dalana Toriteny Alahady 28 Martsa 2016 (Alahadin’ny PASKA) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 28 Martsa 2016 (Alahadin’ny PASKA)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Ho solon’ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady Paska izao dia indro misy fampianarana fohy momba izany izay atolotra antsika. Mirary soa tompoko.
NY FAHASOAVAN’NY PASKA
Ny hazofijaliana sy ny asan’Andriamanitra izay notanterahany ho antsika teo no Filazantsara ho antsika amin’izao Paska izao. Ny fahafatesana ary indrindra ny fitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty moa no ventin-kafatra izay raketin’izany hazofijaliana izany. Voambolana maromaro no ampiasain’ireo soratry ny TV mba ilazana izany fahasoavana izany. Ohatra vitsivitsy amin’ireo voambolana ireo no andeha hazavaintsika tsotsotra eto ambany.
Tsy azo sarahana amin’ny hevitry ny Paska Jiosy ny Paska Kristiana. Raha tenenina amin’ny fehezanteny tsotra dia fahafahana teo ambany fanandevozan’ny Egyptiana sy ireo andriamanitra izay nivavahany ny Paska Jiosy (Eksd 12:1ff.). Ny fahafatesan’ny Egyptiana (ny lahimatoany rehetra, ireo miaramilany tao amin’ny ranomasina mena) no fahaveloman’ny vahoak’Andriamanitra. Fahafahana teo ambany fanandevozan’ny ota sy ny fahafatesana ary ny Devoly kosa ny Paska Kristiana. Ny fahafatesan’i Jesosy teo ambony hazofijaliana dia fahapotehan’ny ota izay nanandevo ireo olona miombona Aminy. Hoy Paoly Apostoly: « …ny toetsika taloha dia niaraka nohombohana Taminy hanimbana ny tenan’ny ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony » (Rom 6:6). Ary raha ny ota izay varavarana fidiran’ny fahafatesana (Jereo Rom 5:12) no levona dia efa fiandohan’ny faharesen’ny fahafatesana koa izany na dia toa nandresy an’i Jesosy aza izy: fahafoanan’ny varavarana fidiran’ny fahafatesana ao amin’ny olona ny fahafoanan’ny ota. Raha efa fiandohan’ny faharesen’ny fahafatesana izany dia efa fiandohan’ny faharesen’ny Devoly izay mpisitraka tamin’izany ihany koa (cf. Gen 3:14, 19). Ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty araka izany no fandreseny izany rehetra izany tampony indrindra. Ny miombona amin’i Jesosy izay nitsangana tamin’ny maty dia olon’afaka amin’ny fanandevozan’ny ota sy ny fahafatesana ary ny Devoly.
Voambolana ara-pitsarana izany kanefa dia nindramin’i Paoly Apostoly koa ilazana ny hafatry ny hazofijaliana. Mbola azo ampifandraisina amin’ny hevitry ny Paska Jiosy ihany koa ity. Ny famonoana ny lahimatoan’ny Egyptiana rehetra dia fampiharan’Andriamanitra taminy ny fitsarany izay manameloka azy ireo noho ny hamafin’ny fony (Eksd 11-12). Tahaka izany koa ny nahafatesan’ireo miaramilany tao amin’ny Ranomasina Mena. Ho fanamarinany ireo Zanak’Israely kosa ny famelomany azy ireo teo anatrehan’izany rehetra izany. Ao amin’ny Paska Kristiana dia niseho avokoa tao amin’i Jesosy teo amin’ny hazofijaliana sy tamin’ny fitsanganany tamin’ny maty izany. Ny famonoana an’i Jesosy Kristy teo ambony hazofijaliana dia fanamelohana izao tontolo izao ao Aminy. Ny fananganana Azy tamin’ny maty kosa dia fanesorana izany fanamelohana izao tontolo izao izany ao Aminy ihany na fanamarinana indray izao tontolo izao.
Noho ny fahatafidiran’ny ota teo amin’ny olombelona dia nanjary zavaboahary simba izy. Andriamanitra dia tsy mba tahaka ny Malagasy: manao réparation ny zavatra simba amin’ny alalan’ny fanaovana bricolage. Ny an’Andriamanitra rehefa simba dia potehany tanteraka aloha ary avy amin’izany no hiaingan’ny famoronany azy ho vaovao tahaka ny namoronany azy voalohany indray (cf. vovoka ianao dia hiverina ho vovoka indray, Gen 3:19). Ny fahafatesan’i Jesosy ary dia famotehana tanteraka ny olombelona miombona ao Aminy ho amin’izany tsy fisiana izany (Rom 6:6) ary ny fitsanganany kosa dia fahariana azy ireo ho vaovao indray (Efes 2:8, 14-16). Ao amin’ny Batisa no ampiraisana ny mino amin’izany hazofijalian’i Jesosy mamotika sy mahary indray ny mino izany.
Ny tena mpankalaza ny Paska dia ireo rehetra izay mandray ho azy izany fahasoavan’izany Hazofijaliana izany ary ny mandray izany amin’ny finoana no ho olon’afaka, marina ary zavaboahary vaovao miaina amin’ny fiainana araka an’Andriamanitra indray. Amen.
Nosoratan’i Pastora Rafalimanana Jean De Dieu, Mpampianatra SALT.
Misaotra betsaka Pastora fa tena manamafy ny finoana tokoa ny fampianarana. Misaotra tompoko!
Misaotra betsaka Pastora